Mataano madaxa iskaga dhegganaa oo la kala fujiyey - Wargane News
Home World News in Somali Mataano madaxa iskaga dhegganaa oo la kala fujiyey
Dhakhaatiir joogta caasimadda India ee Delhi ayaa kala fujiyey laba wiil oo dhakada madaxa isaga dhegganaa.
Ilmaha oo ah laba jirro la kala yiraahdo Jaga iyo Kalia ayaa lagu sameeyey qalliin qaatay 16 saacadood, waxayna iminka ku jiraan qaybta dadka u baahan daryeelka aadka u sarreeya, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen.
Koox dhakhaatiir ah oo 30 ka kooban ayaa qalliinka sameeyey, waana kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu sameeyo isbitaal ay dawladdu maamusho.
Wiilasha waxaa ka dhaxeeyey xididdada dhiigga iyo xuubka maskaxda, waana xaalad dhif iyo naadir ah oo lagu arko mid ka mid ah seddexdii malyan ee ilmood ee dhasha.
Agaasimaha machadka caafimaadka Sayniska ee India, Randeep Guleria, ayaa u sheegay Press Trust of India in “18-ka maalmood ee soo socda ay muhiim u yihiin xaqiijinta guusha qallinkaas”.
Mataanahan oo ka soo jeeda tuulo ku taalla gobolka bariga ee Orisa, ayaa isaga dhagganaa madaxa – xaalad luqadda cilmi sayniska lagu yiraahdo craniopagus.
Xataa ka hor qalliinka waxay ka soo gudbeen marxalado adag. Carruurta sidaas ayagoo iskugu dheggan dhasha ayaa 50% dhinta 24 saac gudahood sida ay dhakhaatiirtu sheegeen.
“Labada ilmoodba waxay qabaan xanuunno kale. Jaga wuxuu ka xanuunsanayaa wadnaha, Kalia-na kelyaha” ayuu yiri Dr A K Mahapatra oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca maskaxda.,
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in caqabadda shaqadooda ka hor timid ay tahay “sidii loo heli lahaa maqaar lagu daboolo labada dhinac ee maskaxda labada ilmood, ayadoo qalliinku sababay daloollo waaweyn oo madaxyadooda ka samaysmay”.
“Haddii mataanaha ay qalliinka ka kacaan, tallaabada xigta waxay noqonaysaa in dib u dhis lagu sameeyo lafaha madaxyadooda” sidaa waxaa yiri Maneesh Singhal oo ah dhakhtar yaqaanna qalliinka balaastigga.
Qalliinkii ugu horreeyey waxaa la sameeyey 28 Agoosto, markaasoo dhakhaatiirtu ay abuureen xididdo marinno kale kale maraya oo aan ahayn kuwii ka dhaxeeyey, kuwaasoo dhiigga ka keenaya maskaxda, kuna soo celinaya wadnaha.
Somaliland: Madaxweynaha Somaliland Oo Cafis U Fidiyay 517 Maxbuus